मेरा असफलताहरू साझेदारी गर्दै (र सक्सेसहरू?) | Martech Zone
आइतवार, नोभेम्बर 9, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
टोपी टिप गर्न म्याकजी म्यूसि जहाँ मैले असफलता भिडियो फेला पारे। यो पोष्ट प्रेरणाको लागि धन्यवाद!
विरलै म एक सफल व्यक्तिलाई भेट्छु जसको पछाडि केही विनाशकारी विफलता हुँदैन। धेरै बर्ष, मैले मेरो सफलतालाई भन्दा अधिक फरक मापन गर्न सिकेको छु। म सफल छु किनकि मैले २ शानदार बच्चाहरू पाएको छु जसलाई म अविश्वसनीय रूपमा गर्व गर्छु र जो मेरो उमेरमा मेरा उपलब्धीहरू भन्दा बढि राम्रो देखाइरहेका छन्।
मेरो जीवनलाई फर्केर हेर्दा, यद्यपि म विश्वास गर्दछु कि मेरो सफलता मेरो असफलताको कारणले आएको छ - उनीहरूको बाबजुद होइन। मैले सुन्दर र colorful्गीन ईतिहास पाए र मैले धेरै नराम्रो निर्णयहरू गरे, तर ago बर्ष भन्दा अघि मैले ध्यान केन्द्रित गर्न छोडेको थिएँ र आफुलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। मा नराम्रो र म के हुँ भनेर पत्ता लगाउन थाले मा महान। मैले मेरा कमजोरीहरूको आलोचना गर्नुको सट्टा मेरो कौशलतालाई राम्रोसँग सिकाउन सहयोग गर्ने मान्छेहरूसँग आफूलाई घेरा गर्न थालें।
मेरो वेकमा, म थियो स्थानान्तरण एक उच्च माध्यामिक स्कूलबाट, युएस नेवीमा रैंकमा फसाइएको, सम्बन्धविच्छेद भएको थियो, केही कम्पनीहरू सुरु गरेको थियो, घर गुमाउनुपर्‍यो र मेरा बच्चाहरूलाई पुनःस्थापित गरियो (दुई पटक)। अर्कोतर्फ, मैले कलेजमा सम्मान-स्तर ग्रेडहरू राखेको थिएँ, सजावट गरिएको थियो र सम्मानजनक रूपमा डिस्चार्ज गरिएको गल्फ वार भेट, धेरै सफल व्यवसायहरू बढाउन जिम्मेवार थियो, कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीमा हात थियो, र एकलको रूपमा सुरक्षित घर पाएको छु। २ इमान्दार र कडा मिहिनेती बच्चाहरूसहित बुबा।
म अहिले भाग्यशाली छु बढ्दो कम्पनी चलाउन मद्दत गर्नका लागि जुन मैले मूल व्यवसाय योजनाहरू निर्माण गर्न मद्दत गरें। म अझै धनी छैन, न त मलाई त्यस्तै भएकोमा मतलब छ। मेरो परिवार अझै अपार्टमेन्टमा बस्छ। मैले प्रत्येक payday मा छोडेको कुनै पनि पैसा मेरो छोराको शिक्षणमा जान्छ वा नयाँ लगानीमा पुन: निवेश हुन्छ। जब सम्म मेरो खुसी परिवार र मेरो टाउको मा छाना छ, म एक खुसी मान्छे हुँ!
यदि तपाईले मलाई सबैभन्दा ठूलो घटनाहरू सोध्नु भयो जसले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्यो भने, मसंग दुई छन्:
मेरो तलाक। म मायालु बुबा थिएँ तर मैले मेरा बच्चाहरू गुमाउने सम्भावनाको सामना नगरे सम्म यो कहिले देखाउँदिन। मेरो सम्बन्धविच्छेदले मेरो सम्पूर्ण जीवनलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्यो।
एक कम्पनी बाट मेरो राजीनामा। स्थानीय कम्पनीमा राजस्व निर्माण गर्दा जुन चार्ट बाहिर थिएन, मलाई नयाँ व्यवस्थापन अन्तर्गत राखियो जुन मलाई लाग्छ कि म एक खतरा हो र मलाई ढोका बाहिर लगियो। म घर आई, सोफेमा बसे, र मित्र डरेन ग्रे र प्याट कोयल भनिन्छ।
प्याटले मलाई तुरुन्तै काममा लगायो र मैले पछि कहिल्यै पछाडि फर्केन। मैले आफ्नै बारेमा मेरो दृष्टिकोण र मेरो मूल्यलाई व्यवसायमा परिवर्तन गरें। म कहिले पनि एक थिएन कर्मचारी फेरी, र कम्पनीहरुसँग काम गर्न जारी राख्नुहोस् जुन मेरो जीवनलाई समृद्ध बनाउँदछ जबकि मैले उनीहरुलाई समृद्ध बनाउनको लागि काम गरें।
कुनै पनि युवा व्यक्तिलाई मेरो सल्लाह भनेको तपाईको सामर्थ्यहरू के हो र तपाईले उनीहरूलाई फाइदा न पुर्‍याउने स्थिति वा अवसरहरू कसरी हटाउने भनेर चाँडै नै तपाईले आनन्द पाउनुहुनेछ। खुशी संग सफलता आउँछ।
टैग: विफलताविफलता भिडियोमार्केटिंग भिडियोहरूसफलता
के टेक्नोलोजी तपाईंको मार्केटिंग सक्षम वा अक्षम बनाउँछ?
नोभेम्बर २०, २००। 9::2008 अपराह्न
अरूलाई प्रेरणा दिन तपाईं महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंले बिर्सनुभयो। यो, मेरो आँखामा, एक कल्पित धन हो, किनभने कसैले यसलाई तपाईबाट डकैतीमा लैजान सक्दैन, कुनै डेसटरले यसलाई पग्लिन वा यसलाई बुलबुले जस्तै पप गर्न सक्दैन ...
राम्रो पोष्ट! साझेदारीको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
धन्यवाद ओटिर, तपाईं एक आश्चर्यजनक दयालु व्यक्ति हुनुहुन्छ।
म एक युवा व्यक्तिलाई मैले मेरो दिमागमा राखेको जीवनमा केहि गर्न सक्छु भनेर भनिरहेको छ। र मेरो वरपर सबैजना सकारात्मक र प्रोत्साहनजनक थिए; कसैले पनि मलाई मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्न सकेन र मेरो दिशाहरू दिनुहुन्छ कि कसरी मेरो शक्तिलाई बजार योग्यतामा बदल्न सकिन्छ र कसरी कमजोरीको स्थितिबाट बच्न सकिन्छ।
एक युवाको रूपमा; म एक अन्तर्मुखी थिएँ र आजसम्म मैले आफ्नो क्यारियरको लागि चुनौतीको रूपमा नेटवर्कि and र रणनीतिक सम्बन्धहरू फेला पारेको छु।
मेरो जीवनलाई फर्केर हेर्दै; मलाई लाग्दैन कि मैले धेरै राम्रा असफलताहरू पाएँ किनभने मैले कुनै ठूलो ठूलो सम्भावना कहिल्यै लिएको छैन जसले ठूलो सफलताको परिणाम दिन्छ।
डग, मलाई धेरै सोच्नको लागि धन्यवाद।
स्कट, तपाईलाई धेरै स्वागत छ! तपाईं अचम्मै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ - कुनै कुराले तपाईंलाई रोक्न नदिनुहोस्।
मैले तपाईलाई पहिलो पटक भेटेको हुनाले तपाईले मलाई सँधै प्रेरणाको रूपमा सेवा गर्नुभयो। म पक्का छु कि त्यहाँ धेरै छन् कि म पछि दोस्रो।
र, एक साँझ चाँडो, हाम्रो देश को लागी तपाइँको सेवा को लागी धन्यवाद!
धेरै धेरै जुली धन्यवाद! मेरो सेवा आजकल भेट्सको तुलनामा केकको एक टुक्रा थियो।
नोभेम्बर २०, २००। 11::2008 अपराह्न
यो चाखलाग्दो छ कि तपाईंले "आगोमा परीक्षण" मार्फत पत्ता लगाउनु भएको छ कि कसैको सामर्थ्यलाई ठूलो पार्दै खुशीको कम्तिमा एउटा कुञ्जी हो।
वैज्ञानिकहरू पनि यस्तै निष्कर्षमा पुगेका छन। तपाईं भिडियोहरू र लेखहरूको श्रृंखला भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन "खुशी" को धारणामा डुल्दछ। यहाँ.